Indlela yokujongana nesibini kwingxaki ebangelwa kukufika komntwana wabo wokuqala | Bezzia
UMaria Jose Roldan | | Ubudlelwane
Ukufika komntwana kuhlala kubonisa utshintsho olukhulu kubomi besibini. Ngaphandle kokwazi indlela yokulawula ngokufanelekileyo, kunokwenzeka ukuba iziseko zobudlelwane ziqale ukudilika ngendlela eyingozi. Ukuzalwa komntwana ngokungathandabuzekiyo luvavanyo lwe-litmus kubazali.
Ukwazi indlela yokulawula imeko entsha kunokuncedisa ukuqinisa ubudlelwane kunye ukukwazi ukuyonwabela ngokupheleleyo into yokuba ukuba nomntwana kunyanzelekile. Kwinqaku elilandelayo siza kukubonisa oonobangela okanye izizathu zokuba isibini sinokuphazamiseka ngaphambi kokufika komntwana waso wokuqala noko simele sikwenze ukukulungisa.
1 Ingxaki yesi sibini emva kokuzalwa komntwana wabo wokuqala
2 Izizathu zengxaki kwisibini ngenxa yokufika komntwana
3 Yintoni enokuyenza ukuze ugweme amaxesha eengxaki emva kokuzalwa komntwana wokuqala
Ingxaki yesi sibini emva kokuzalwa komntwana wabo wokuqala
Isibini ngasinye sihlangabezana nengxaki enokwenzeka ngendlela eyahlukileyo. Kwezinye iimeko kukho imilo okanye izinyeliso ngokuthe rhoqo, ngoxa kwezinye iimeko kukho ukurhoxa ngokweemvakalelo. Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, oku akulunganga konke konke kubudlelwane, kubangele ukuwohloka okukhulu kulo.
Ukuba loo nto ayilungiswanga, kusenokwenzeka ukuba oku kukhathazeka kukhankanywe ngasentla kuya kugcina kuwonakalisa kakubi usapho lonke. Ukuze ugweme oku, kubalulekile ukufumana izizathu ezibangela ukungahambi kakuhle kunye nesenzo ukwenzela ukuba i-nucleus yentsapho ingonakaliswa nanini na.
Izizathu zengxaki kwisibini ngenxa yokufika komntwana
Eyokuqala yoonobangela idla ngokuba ngenxa yemibandela yobuqu yabazali bobabini. Kwimeko kamama, kufanele kuphawulwe ukuba umzimba wakhe uye wenza utshintsho olubalulekileyo kunye nemeko yakhe yeemvakalelo. Kwimeko kayise, Imbopheleleko inkulu ngakumbi xa kufikelelwa kumbandela wokunyamekela umntwana omncinane.
Esinye isizathu sobunzima sisenokuba kungenxa yotshintsho olumandla kwiinkqubo zemihla ngemihla. Ukuba nomntwana kuthetha ukuba kufuneka utshintshe ubomi bakho ngokupheleleyo kwaye ugxininise ngokupheleleyo kwintlalontle yomntwana. Abazali abanalo ixesha labo kunye nokukwazi ukuqhawula uxhulumaniso.
Esinye sezizathu eziqhelekileyo zokuba kutheni izibini zixambulisana xa zifumana umntwana wazo wokuqala kungenxa yokwahlulwa komsebenzi wendlu. Kwizihlandlo ezininzi akukho bulungisa xa kusahlulahlula imisebenzi eyahlukeneyo ngaphakathi kwendlu kunye Oku kuphelela kwiingxabano ezinamandla.
Alithandabuzeki elokuba ukunyamekela usana kuba yeyona nto ibalulekileyo kwesi sibini. Oku kuthetha ukuba ixesha lesibini lincitshiswa kakhulu. Amaxesha okonwaba kwesi sibini anyamalala phantse ngokupheleleyo kwaye oku kunefuthe elibi kwikamva elihle lobudlelwane.
Yintoni enokuyenza ukuze ugweme amaxesha eengxaki emva kokuzalwa komntwana wokuqala
Kulungile ukuba abazali bexesha elizayo bafumane ngaphambi kokuzalwa, kuyo yonke into ehamba nomntwana.
Akukho nto iphosakeleyo ngokuhlala phantsi, ukuthetha, nokuqalisa ukulungelelanisa imisebenzi eyahlukahlukeneyo oya kujamelana nayo xa umntwana wakho ezalwa. Yindlela efanelekileyo yokuphepha iingxabano kunye nemilo.
Kubalulekile ukuba umzali ngamnye abe nexesha elincinane lokukhululeka, ukukwazi ukuqhawula imizuzu embalwa kuxanduva lokunyamekela usana.
Ukuba kuyimfuneko, kulungile ukucela uncedo kubahlobo okanye kusapho. Ngamanye amaxesha olu ncedo lubalulekile ukuphepha iimeko zoxinzelelo okanye ixhala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Indlela yokujongana nesibini nengxaki ebangelwa kukufika komntwana wabo wokuqala
Intombi yam ifuna ukuthambisa, kuse early kakhulu?